Otu esi etinye / Kwado RPM Fusion na Rocky Linux 8 - LinuxCapable
November 21, 2021 by Jọshụa James
Lelee maka RPM Fusion
Wụnye & Kwado RPM Fusion Repositories
Ihe Nlereanya Fusion RPM
Wụnye & Chọọ maka ngwugwu
Wụnye RPM Fusion AppStream Meta Data
Wụnye RPM Fusion Multimedia
Mkpokọta nke RPM Fusion
Otu esi ewepu (wepụ) RPM Fusion Repo
RPM Fusion bụ ebe nchekwa ngwungwu mgbakwunye maka Rocky Linux na EL+EPEL nke otu ndị ọrụ afọ ofufo na-akwado. RPM Fusion abụghị ebe nchekwa kwụ ọtọ mana ndọtị nke ngwugwu ndabara Rocky Linux enweghị ike itinye n'ihi Rocky Linux ejiri otu mmachi iwu dị ka okpu uhie.
Ebe nchekwa RPM Fusion na-abịa na ekpomeekpo abụọ, efu na enweghị efu. Ebe nchekwa n'efu nwere ụdị sọftụwia nke mepere emepe na enweghị n'efu, nke nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ sọftụ efu niile mana ọ bụ isi mmalite mechiri emechi yana nke nwe ya.
N'ime nkuzi na-esote, ị ga-amụta ka esi etinye RPM Fusion na sistemụ arụmọrụ Rocky Linux 8 gị.
Ọrụ mbụ bụ ịlele ma agbanyere ebe nchekwa RPM Fusion. Mgbe ị na-etinye Rocky Linux, ị nwere nhọrọ iji melite ebe nchekwa ndị ọzọ.
Mepee ọdụ gị, wee jiri iwu grep na-esonụ, nke ga-ebipụta hits ọ bụla na listi dnf repo gị.
Ọ bụrụ na ịnweghị ebe nchekwa RPM Fusion ọ bụla na ndepụta dnf repo gị, nsonaazụ ga-alọghachi n'enweghị ihe ọ bụla. Ọ bụrụ na nke a bụ ikpe, gaba na akụkụ nkuzi na-esote.
Iji wụnye RPM Fusion repo's na ọdụ gị, ị ga-eme iwu ndị a.
Mara, ọ bụrụ na ị bụ onye na-akwado isi mmalite, tinye naanị ebe nchekwa efu. Maka ndị ọrụ ndị ọzọ niile, wụnye ha abụọ.
sudo dnf install --nogpgcheck https://dl.Rocky Linuxproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm -y
Iji mee ka ebe nchekwa na-abụghị nke efu:
Na-esote, nyochaa nwụnye.
Nke a egosila na a na-ebubata ebe nchekwa ahụ nke ọma, gaba n'ihu ịmụta ụfọdụ ọmụmaatụ nke iji RPM Fusion.
Ọtụtụ ngwa ewu ewu na-adịghị abanye na ebe nchekwa ndabere nke Rocky Linux, dị ka Steam, nwere ike itinye ugbu a.
Wụnye ihe atụ Steam:
Iji chọọ ngwugwu iji hụ ma ọ dị ha site na iji njikwa ngwugwu DNF, nke RPM Fusion bụ akụkụ nke ugbu a, jiri ya. dnf search iwu.
Ọzọkwa, ịwụnye ihe dnf-utilities ngwugwu nwere ike rụpụta nsonaazụ ka mma.
Mgbe ahụ jiri iwu ajụjụ repo. Ihe atụ ga-aga n'ihu na-eji onye ahịa egwuregwu Steam.
Dị ka ị na-ahụ, ngwugwu Steam na-abịa site na RPM Fusion Non-Free repository. Kwesịrị ekwesị, ị nwere ike iji search dnf ma lelee ya dnf repoquery iwu iji nyochaa ngwugwu ọ bụla na-eji njikwa ngwugwu dnf.
N'ikpeazụ, iji bipụta ndepụta ngwugwu niile dị na ebe nchekwa ọ bụla na-enweghị n'efu, jiri iwu njedebe na-esote.
Mbipụta ngwungwu niile RPM Fusion efu:
Ihe ngwungwu RPM Fusion niile anaghị akwụ ụgwọ:
Ebe nchekwa RPM Fusion na-enye ngwugwu maka GNOME na KDE Discover.
Ebe nchekwa RPM Fusion na-enyekwa ngwugwu na mmelite iji kpọọ faịlụ mgbasa ozi yana ndakọrịta GStreamer.
Wụnye ngwugwu mgbasa ozi maka ngwa GStreamer akwadoro:
Wụnye ngwugwu ụda na vidiyo nke ngwa ụfọdụ chọrọ:
RPM Fusion nwere ihe a maara dị ka "emetọ" ebe nchekwa maka n'efu na enweghị n'efu. N'ịchịkọta ya, ebe nchekwa ndị a nwere ngwanrọ na-akwadoghị iwu na obodo ụfọdụ, dị ka iji DVD kpọọ mmmmmmmmmmmmm.
Wụnye nkwado efu Taint RPM Fusion (Maka ngwugwu Floss) na libdvdcss:
Wụnye Taint RPM Fusion nkwado na-abụghị nke efu (maka ngwugwu na-abụghị nke floss):
Ozugbo emechara, jiri iwu grep lelee dnf repolist nke RPM Fusions niile arụnyere ugbu a.
Iji wepụ ebe nchekwa na sistemụ Rocky Linux gị dị mfe. Iji wepụ ebe nchekwa, ịkwesịrị ịchọta aha ma jiri dnf wepụ iwu, ma nke mbụ, jide n'aka na ị nwere aha zuru ezu. Enwere ike ime nke a site na iji iwu a.
Ugbu a mepee ọnụ ụzọ gị wee jiri ihe ndị a.
Iji wepu ebe nchekwa efu, jiri:
Iji wepu ebe nchekwa na-abụghị nke efu, jiri:
Iji wepu ebe nchekwa efu (Emerụrụ ure), jiri:
Iji wụnye Fusion mbanye, megharịa usoro ahụ na mmalite nkuzi.
N'ime nkuzi a, ị mụtala ka esi etinye ebe nchekwa RPM Fusion n'efu yana enweghị n'efu yana ebe nchekwa ndị emetọghị na sistemụ arụmọrụ Rocky Linux 8 gị.
N'ozuzu, a na-ejikwa RPM Fusion na nkesa ụdị RHEL, ọ bụkwa nhọrọ a na-akwanyere ùgwù maka ịnweta ngwugwu na-adịghị na ndabara ka ị na-eji njikwa ngwugwu dnf na-ejighị aka wụnye ma ọ bụ jiri ọrụ ndị ọzọ dị ka flatpak ma ọ bụ snap. .
Ka ịchọọ nchekwa data nchekwa RPM Fusion maka ngwugwu, gaa na ebe a.
Categories Nkume linux Tags Nkume linux, Mgbanwe nke RPM Mail igodo
Otu esi etinye Python 3.11 na Linux Mint 20